२०७६ माघ ८ बुधबार १९:२७:५२ प्रकाशित
धनगढी- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने बताएका छन्।
‘संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक अस्पताल र एक प्रतिष्ठान बनाउने नीति लिएको छ,’ बुधबार गेटा मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्दै मन्त्री ढकालले भने, ‘सुदूरपश्चिमबाट प्रतिष्ठान बन्न सक्ने यही मात्र हो।’ उनले भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था आशलाग्दो भएको बताउँदै यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। समय अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न भए थप आवश्यक रकम निकासा गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
‘नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कुरा सुधार्नुपर्ने देखिन्छ तर, विश्वमै आँखाको उपचारमा भने राम्रो छ,’ गेटा आँखा अस्पतालले भारतीय नागरिकको पनि विश्वास जित्न सफल भएकोमा प्रशंसा गर्दै उनले भने, ‘अझै राम्रो र गुणस्तरीय सेवा बनाउन अन्यत्रको अभ्यासलाई पनि आत्मसात गरिनुपर्छ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रतिष्ठान बनाउन पहल भइरहेको बताएका छन्। ‘२०६५ सालदेखि यो कलेजको काम अघि बढेको थियो। दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउन विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिएको थियो’ मन्त्री भट्टले भने, ‘तर, २०६८ सालमा संविधान सभा विघटन भएपछि त्यसको काम अघि बढ्न पाएन। अब यसलाई प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले नेतृत्व लिनुपर्छ।’
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका अध्यक्ष चेतराज पन्तले आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेकोले अध्यापन सञ्चालन गर्न ‘मोडेल’को टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम उपकरणहरु पनि ल्याइसकिने बताए।
मन्त्री ढकाल र भट्टसँगै पूर्व अर्थमन्त्री दामोदर भण्डारी, पूर्व सभासद हरि श्रीपाईलीले पनि मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेका थिए। मन्त्री ढकालले गेटा मेडिकल कलेजसंगै गेटा आ“खा अस्पताल र कञ्चनपुरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको पनि निरिक्षण गरेका थिए।
सात प्याकेजमा संरचना निर्माण
निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका अनुसार प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ।
‘सात प्याकेजमा २६ वटा संरचना निर्माण भइरहेको छ,’ गेटा मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदले भने, ‘सबै भौतिक संरचनाको निर्माण अवस्था हेर्दा ६५ प्रतिशत काम भइसकेको छ भने उपकरण लगायतलाई जोड्दा ४० प्रतिशत काम भएको छ।’ उनका अनुसार छात्र/छात्रा छात्रावास, चिकित्सक आवास कक्ष, कुरुवा, शवदाह घर, अक्सिजन प्लान्ट र थप तीन सय शैय्याको अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण कार्य भइरहेको बताए।
मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माणमा चरणमा तीन अर्ब ७५ करोड र दोस्रो चरणमा ४ अर्ब २५ करोड गरी करिब आठ अर्ब बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ। अहिले पहिलो चरण अन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको समितिले जनाएको छ।
समितिका इन्जिनियर पवन रावलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चार करोड, ०७४/७५ मा ८८ करोड, ०७५/७६ मा ९९ करोड ६० करोड खर्च गरिएको जानकारी दिए। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब २८ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा ३० करोड रकम खर्च भइसकेको जनाइएको छ।
सातै प्याकेज अन्तर्गत प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्यका लागि तीन पटक म्याद थप गरिएको छ। सो भवनको समयावधि एक महिना बाँकी रहँदा अहिलेसम्म ७० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
दोस्रो प्याकेजमा कलेजको भवन रहेको छ। यो भवनको पनि एक महिना समयावधि बाँकी छ। हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ। तेस्रो प्याकेजमा रहेको ३ सय शैय्याको अस्पताल भवनको समयावधि असारसम्म छ। हालसम्म यसको प्रगति ८० प्रतिशत छ। चौथो चरणमा छात्र र छात्राको दुई वटा छात्रावासको काम ८५ प्रतिशत पुरा भइसकेको जनाइएको छ। कलेजको सबैभन्दा सुस्त गतिमा चिकित्सक आवास गृहको भवन रहेको छ। पाँचौं प्याकेजका रुपमा निर्माण कार्य शुरु भएको सो भवनलाई असारभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा ५० प्रतिशतमात्र काम पूरा भएको छ।
कलेजको छैठौं प्याकेजमा कुरुवा घर, शव गृह, अक्सिजन प्लान्ट, गेट, लण्डरी, अटोक्लिपलगायतका रहेका छन्। यो प्याकेजमा ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ। सातौं प्याकेजमा थप ३ सय शैय्याको अस्पतालको भवन रहेको छ। यसको पनि काम ७० प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ।
२०६५ सालमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल सुरु भएपछि २०७१ सालमा मेडिकल कलेजका रूपमा प्रशासनिक भवनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। रुख क्षेत्रमा सो भवन परेपछि दुई वर्षसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। समितिका अध्यक्ष चेतराज पन्तले मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माण कार्य २०७३ सालदेखि अघि बढेको जानकारी दिए। ‘हिउँदे वर्षाले इट्टाभट्टामा क्षति पुगायो। जसका कारण इट्टा पाउनै मुस्किल भएपछि प्रदेशबाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले मजदुर नपाउने समस्या पनि निर्माण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे।
स्वायत्त प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ
सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूले निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वायत्त प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजसहित ५ कलेजलाई एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा अघि बढाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वायत्त प्रतिष्ठानका रुपमा अघि बढाउनस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सुझाव दिए।
मन्त्रीलाई प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव झंकरबहादुर विष्टले मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य अवस्थाबारेको कार्यपत्र मन्त्री ढकाललाई हस्तान्तरण गरी जानकारी दिएका थिए। सचिव विष्टकाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल बजेट १३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ७१ हजार रहेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७१ हजार छ। उनले प्रदेशमा स्वास्थ्य तर्फ एक अर्ब १९ करोड ३९ लाख ४८ हजार रकम विनियोजन भएको जानकारी दिए।
कैलालीको क्षयरोग केन्द्रमा बेल्जियमकी राजकुमारी
४. चीनबाट मेडिकल सामाग्री लिएर फर्कियो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज
५. कोरोना भाइरसः मृत्यु हुनेको संख्या २४ हजारभन्दा बढी